किराना पसल कोरोना फैलाउने माध्यम बन्ने खतरा, विज्ञ भन्छन्– ‘हाम्रो निषेधाज्ञाको मोडल नै गलत’
काठमाडौं उपत्यकामा अहिले निषेधाज्ञा छ । अत्यावश्यक सामान बोकेकाबाहेक अन्य सवारी साधनहरू हिँड्न दिइएको छैन । दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलहरू बिहान सवा ९ बजेसम्म मात्रै खुल्न दिइएको छ ।
कोरोनाभाइरसको संक्रमण नफैलिन नदिनका लागि उपत्यकाका तीनै जिल्ला काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले पहिलो चरणमा गत ४ गतेदेखि १० गतेसम्म र दोस्रो चरणमा फेरि १७ गते बेलुका १२ बजेसम्म निषेधाज्ञा लागू गरेका छन् ।
उपत्यकामा निषेधाज्ञा लागू गरेपनि बिहान ३/४ घण्टा खाद्यवस्तु तथा दैनिक उपभोग्य वस्तुका पसलहरू खोल्न दिँदा भीडभाड देखिएको छ । उपभोक्ताहरू दैनिक सामान किन्न आउँदा कुनै स्वास्थ्य प्रोटोकल अपनाएको देखिँदैन ।
त्यति मात्र होइन भीडभाड हुने पसलमा स्वास्थ्य प्रोटोकलको त कुरै छाडौँ सामान्य मास्क समेत लगाएको देखिँदैन ।
बालाजुमा किराना पसलको व्यापार गर्दै आएका एकजना व्यापारीको भनाइलाई मान्ने हो भने पसलमा किन्न आउने २५ प्रतिशत मानिसहरू मास्कविनै पसलमा सामान किन्न आउँछन् ।
‘सयमा २५ जना मानिसहरूले त मास्क नै नलगाइ आउनुहुन्छ, किन मास्क नलगाएको भन्यो भने यहाँ त सधैँ आउने पसलमा किन मास्क लगाउनु भन्ने खालको जवाफ आउँछ, आजभोलि मैले सोध्नै छाडें,’ ती पसलेले लोकान्तरसँग भने ।
बालाजु, नेपालटार क्षेत्रमा रहेका पसलहरू बिहानको समयमा भीडभाड देखिन्छन्, तर कुनै पसलमा सामाजिक दूरी कायम भएको देखिँदैन ।
न त पसलेहरूले सामाजिक दुरीका लागि अनुरोध गरेको देखिन्छ, न त ग्राहक आफैं सचेत भएको देखिन्छ । कतिपय ग्राहकहरू मास्कविनै सामान किन्न गइराखेका छन् भने अधिकांश पसलेले मास्कको सही प्रयोग र पञ्जा प्रयोग गरेको देखिँदैन । धेरैजसो पसलमा स्यानिटाइजर त देखिँदैन नै । कतिपयले चिउँडोमा मास्क लगाएको देखिन्छ ।
‘पसलेले मास्क लगाएको मैले कमै मात्र देखेको छु, आफैँलाई डर लाग्छ । कतिपय अवस्थामा मास्क लगाएको र स्यानिटाइजर भएको पसल खोज्दा बिहान पनि बितेको छ,’ बालाजु पुरानो गुह्येश्वरी घर भएकी विनिता महर्जनले लोकान्तरसँग भनिन् ।
‘हिया जित छुन मजुनुनी, जित मथिउनी कोरोना’ अर्थात् (अहिलेसम्म मलाई केही भएको छैन, कोरोना लागेको छैन) भन्ने जवाफ दिने गरेको महर्जनले लोकान्तरलाई बताइन् ।
जनघनत्व बढी भएको उपत्यकामा कोरोना भाइरसको जोखिम अत्यधिक रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले बताउँदै आएका छन् ।
निषेधाज्ञाको मोडल नै गलत : विज्ञ
अहिलेको निषेधाज्ञाको मोडल नै गलत भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. समीरमणि दीक्षित बताउँछन् ।
‘अहिले गरिएको निषेधाज्ञाले कोरोनाभाइरस संक्रमण बढाउने मात्रै काम गर्छ, किनकी मानिसहरू दिनभरी पसल खुल्दा आफ्नो अनुकूल मिलाएर भीडभाड नहुने समयमा सामान किन्न जाँदा जोखिम कम हुन्थ्यो, अहिलेको लकडाउनको मोडल नै गलत छ,’ डा. दीक्षितले लोकान्तरसँग भने ।
अहिलेको अवस्था सबैभन्दा धेरै जोखिम नै दैनिक उपभोग्य वस्तुका सामानहरू खरिद गर्ने भएको जनस्वास्थ्य विज्ञ दीक्षितले बताए ।
‘अहिले निषेधाज्ञाको समयमा बिहान केही समय खोल्दा मानिसहरूको भीड नै किराना तथा तरकारी पसलमा छ, त्यहाँ सबैभन्दा जोखिम छ,’ डा. दीक्षितले लोकान्तरसँग भने ।
सीमित समय तोकिँदा मानिसहरूको भीड बढी हुन्छ । मानिसहरूको चहलपहल बढी हुने ठाउँमा कोरोनाभाइरसको जोखिम बढी छ ।
सरकारले दैनिक कोरोना परीक्षणको दायरा बढाएको देखिँदैन । सरकारले परीक्षण पनि नगर्ने र कोरोना संक्रमण बढ्यो भन्दै गलत मोडलको निषेधाज्ञा गर्दै जाँदा मानिसहरूको दैनिक जीवनमा समस्या आउने दीक्षितको भनाइ छ ।
आगामी दिनमा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तुका सामानहरू खरिद बिक्री गर्ने ठाउँमा कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने डा. दीक्षितले बताए ।
दैनिक जीवन फेरियो, जिउन सिकौंं : डा. पुन
कोरोना भाइरसको संक्रमण विश्वमा कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने कुरा कसैलाई थाहा नभएकाले अबको जीवन कोरोना मैत्री भएर जिउन सिक्नुपर्ने शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिट संयोजक डा. शेरबहादुर पुन बताउँछन् ।
‘अबका दिनमा हामीले कोरोनामैत्री भएर जिउन सिक्नुपर्छ । यो संक्रमण कहिलेसम्म जान्छ भन्ने कसैलाई पनि थाहा छैन, सबैले अनुमानका भरमा मात्रै कुरा गरिरहेका छन्,’ डा. पुले लोकान्तरसँग भने ।
डाक्टर पुनका अनुसार अबका दिनमा आम मानिसहरूले आफ्नो जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनुपर्छ । ‘यो कोरोनाभाइरसको संक्रमण कहिलेसम्म सकिन्छ भन्ने कुरा कसैले पनि ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन । डब्लूएचओको पनि एउटा अनुमान मात्रै हो, त्यसलाई सत्य मान्न सकिँदैन,’ उनले भने ।
नेपालको हकमा त विषेश गरेर यहाँ संक्रमण घटे पनि भारतमा अन्त्य नभएसम्म दैनिक जनजीवन यस्तै तरिकाले जिउनुपर्ने हुने भएकाले आम मानिसहरूले अबको आफ्नो दैनिक जीवन मास्क लगाउने, सामाजिक दुरी कायम गरेर हिँड्ने गर्नुपर्ने पुनले बताए ।
‘नागरिकहरू सचेत हुनुपर्छ, निषेधाज्ञा धेरै गरेर पनि मानिसहरूको जनजीवन अझ धेरै समस्यामा जान्छ, यसले कोरोना संक्रमणको दर रोकेको पनि देखिँदैन,’ पुनले भने ।
विषेश गरेर आफ्नो दैनिक जीवनमा आवश्यक पर्ने किनमेल होस् या अफिस जुनकुनै स्थानमा पनि कोरोना संक्रमणबाट जोगिने सुरक्षाका उपायहरू अपनाएर जिउन सिक्नुपर्छ ।
अबका दिनमा विषेश गरेर व्यापार गर्ने व्यापारी तथा पसलेले आफ्नो पसलमा आउने ग्राहकलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने र किनमेल गर्ने ग्राहकले पनि कसरी आफ्नो सुरक्षातर्फ ध्यान दिने भन्नेतर्फ सचेत रहनुपर्ने डा. पुनको भनाइ छ ।
सरकारले संक्रमणबाट जोखिमका लागि सुरक्षाका उपायहरू अपनाउनका लागि जनचेतना फैलाउनुपर्ने आवश्यक देखिन्छ, र आमजनताले पनि आफूलाई कसरी सुरक्षित राख्ने भन्नेतर्फ सचेत भएको भए अहिलेको निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने आवस्था नै नआउने डा. पुनले लोकान्तरलाई बताए ।